Jaban qaybo ka mid ah warshad naxaas ah iyo alaab-qeybiyeyaal. Ouzhan
Naxaasku waa dahaadh naxaas ah oo leh zinc oo ah isku-darka ugu weyn ee lagu daro walxaha laysku daro. "Red punch" dhab ahaantii waa geedi socod extrusion kulul.
Naxaas biraha aan birta ahayn ee foojarka-qaabeynta qaab saxan oo naxaas ah
Nidaamka feedhka cas ayaa ah geedi socod xirfadeed horumarsan oo hadda la soo saaray iyada oo lagu salaynayo been abuur casri ah iyo xoqitaan kulul. Horumarka bulshada iyo horumarka sayniska iyo teknolojiyada, warshadaha mashiinada waxay soo bandhigeen shuruudo cusub oo xoog farsamo oo loogu talagalay qaybaha makaanikada. Goobaha dalabka waxaa ka mid ah cafiska diyaaradaha, matoorada naaftada ah, waxyaabaha la iloobo, waxyaabaha la iska cafiyo ee laga helo meelaha kala duwan, cafiska badda, hubka la iska cafiyo, kiimikada kiimikada, gafafka macdanta, aaladaha nukliyeerka.
Faa'iidooyinka been abuurka biraha aan birta ahayn
- Hagaajinta awoodda farsamada
- Tuurista waxay leeyihiin saxnaan cabbir sare leh iyo qallooc dusha hooseeya
- Balaastiig wanaagsan oo heerkulka qolka iyo heerkulka sarreeya
- Isticmaalka birta sare
- Heerkulka cimilada xun ee been abuurka ah; kuleylka kuleylka wanaagsan
Mabda 'Brass forging processing'
1. Burburi qaab dhismeedka shubista dhabta ah, ka dhig midho wanaagsan, kuna cadaadi meelaha yar yar ee banaan (xoojinta isku soo dhawaanshaha) si loo hagaajiyo aaladaha farsamada iyo da'da.
2. Ku miirashada maran qaabab kala duwan oo shey oo ay kujiraan durdurro bir ah.
OEM kartoo bir ah non-Ferrous adeegga been abuurtay-Shiinaha Shanghai naxaas biraha-birta biraha forging qaybo soo saaraha
Ouzhan waa soo saare isku xiraya warshadaha iyo ganacsiga, oo bixiya hal-joojin adeegyo mashiinka lagu rogo oo loo habeeyo. Naxaaska sare ee saxda ah ee la abuurayo oo leh tayo xasilloon oo la isku halleyn karo ayaa loo shaqeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Qeybahan mashiinka waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo alaabada ceeriin ee ugu tayada wanaagsan, kuwaas oo laga helo qeybiyeyaasha qeybaha saxda ah ee caanka ku ah suuqa. Kooxdayada farsamada adag iyo xirfadeed iyo maaraynta hufan iyo nidaamka hawlgalku waxay xaqiijin karaan soosaarka saxda ah ee qaybaha farsamada naxaasta ah. Intaa waxaa dheer, alaabooyinka naxaasta been abuurka ah ee la bixiyo waxay si adag u hoggaansamayaan heerarka tayada waxaana loo isticmaali karaa codsiyada kala duwan ee warshadaha. Oo waxaan ku siin karnaa adeegyo qiimo tartan ah qaybaha been abuurka ah ee macaamiishayada qiimaha leh.
Maxay yihiin isticmaalka qaybo naxaas been abuur ah
Naxaas badiyaa waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo filtarka, tuubooyinka biyaha, tubooyinka isku xira qaboojiyayaasha hawada gudaha iyo dibaddaba, iyo hiitarka.
Faa'iidooyinka Adeegga Been Abuurista Ouzhan
- Dhammaan alaabooyinka been abuurka ee naxaasta ah waxay ku xiran yihiin kormeerro tayo leh oo adag.
- Adeegga degdegga ah ee OEM wuxuu xaqiijin karaa inaad hesho alaabada aad rabto, taageer DDP, CIF, FOB iyo qaababka kale ee lacag bixinta si loo hubiyo in macaamiisha ay alaabada u heli karaan si nabadgelyo leh.
- Marka loo eego sawirro ama shaybaarro si loo sameeyo qaybo saxan oo naxaas ah.
- Ouzhan wuxuu leeyahay in kabadan dersin mishiinada wax lagu farsameeyo, adeegyo isku dhafan, khadadka wax soosaarka caadiga ah, wuxuuna la yimaadaa shahaadooyin shey iyo warbixinno tijaabo ah
Hore: CNC caag beddelaya
Xiga: OEM ahama qaybo ka leexashada ahama OEM
Ahama ahama qaybo farsamo been abuurtay ...
Ka samaynta qaybo bir bir ah